Chelsea oo markaan dalab aan la diidi karin u diyaarisay Romelu Lukaku & Weeraryahanka laftiisa doonaya inuu dib ugu soo laabto Stamford Bridge – Gool FM
Haaruun August 4, 2021
(London) 04 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay dalab cajiib ah ka gudbiso Weeraryahanka naadiga Inter Milan ee Romelu Lukaku, waxaana ay u muuqdaan kuwo markaan ka weecday doonistii ciayaryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Lukaku oo horay ugu soo ciyaaray Chelsea, laakiin aan muhiim ka ahayn Kooxda waqtigaas ayaa isaga tagay waxaana heshiis 28 milyan oo gini ah uu ugu biiray Kooxda isla England ka dhisan ee Everton.
Sida warinayso shabadda ciyaaraha ee Goal, Kooxda Chelsea ayaa haatan isku diyaarinaysa inay dalab cusub oo ku kacaya 130 milyan oo euro oo u dhiganta 111 milyan oo gini ama 154 milyan oo dollar ka gudbiso Weeraryahanka Inter ee Romelu Lukaku.
Waxaa horay loo wariyey shalay in Kooxda Blues ay dalab 100 milyan oo euro ah oo u dhiganta 85 milyan oo gini ama 119 milyan oo dollar ka gudbisay xiddigan reer Belgium balse laga soo diiday.
Laakiin dalabkaan dambe ee 130 milyan oo euro ah oo ay Chelsea doonayso inay dib ugu soo celiso Lukaku garoonka Stamford Bridge xagaagan ayaan ahayn mid aysan Inter Milan si fudud ku diidi karin.
28 sano jirkaan ayuu la dhacsan yahay Tababare Thomas Tuchel oo doonaya inuu Premier League u tartamo xilli ciyaareedka cusub ee 2021-22, iyadoo Wargeyska The Sun uu warinayo in Weeraryahanka qudhiisa uu doonayo dib ugu soo laabashada garoonka Stamford Bridge.